Kely = Bebe kokoa | Martech Zone
Te-hanaraka ny ahy aho Misokatra = Fitomboana mandefasa mandritra ny fotoana fohy. Voalaza ao anatin'io lahatsoratra io ny mety hahitana fahombiazana rehefa mifantoka amin'ny fomba fampidirana vahaolana miaraka amin'ireo vahaolana hafa ny olona. Misy lafiny hafa amin'izany, ary izany dia ny orinasa hametra ny fiasan'ny vahaolana arahin'izy ireo amin'ny votoatin'ny fampiasan'izy ireo. Mety hampidi-doza ny manampy be dia be amin'ny vokatra, serivisy ary endri-javatra.
Antsoin'ny programmer hoe 'mikisaka'.
'Creep' no nofy ratsy an'ny mpamorona rehetra. Mitranga izany raha tsy voatazona sy harahina ny drafitra fampandrosoana matanjaka. Manohy ny fiasa mitsofoka ao mandra-pahatongan'ny tetikasa tsy voafehy loatra ka tsy vita. Na ratsy kokoa, vita ilay izy ary manana bibikely tsy tambo isaina.
Alefaso ireo orinasa ireo, ary ny vokatra sy ny serivisin'izy ireo dia mety hijaly koa 'mikisaka'. Amin'ny tsy famerana ny orinasanao sy ny vokatra ary ny serivisy ataonao dia manomboka manenjika avana ianao, mieritreritra fa mety hisy izany na eto. Na izany aza, tsy raharahianao ny mahita ny fahasimbana eo amin'ny fifantohan'ny asa aman-draharaha, ny fifantohan'ny mpiasa sy ny fahalalany, ary koa ny fihenan-danja apetraka amin'ny famokarana, ny fanohanana, ny fandefasana sns.
Isaky ny manapa-kevitra ny hijery vokatra fanampiny, serivisy na endri-javatra fanampiny ianao dia jereo raha efa misy orinasa any izay manome azy ho ampahany amin'ny ivon'ny orinasany. Afaka manao azy tsara kokoa noho izy ireo ve ianao? Azon'ny orinasanao tohanana ve izany IZANY ary manohy mitazona ny fahaiza-manao amin'ny fotonyo? Te-hanohana azy ve ny mpiasanao?
Amin'ny farany, mety hanimba anao fotsiny ny fanenjehana avana.
Tags: fampandrosoana ny fampiharanamikisakaendri-javatra mandadyToetoetraKely kokoatsotra